Tag: google + maka azụmahịa | Martech Zone
Tag: google + maka azụmahịa
Ekele diri enyi anyi na onye ndu mgbasa ozi mgbasa ozi, Chris Brogan, na ihe omuma a siri ike banyere ihe kpatara ya na otu ulo oru kwesiri iji Google+ kwalite ahia ha na ntaneti. Igodo maka ndị ahịa anyị abụrụla njikọ miri emi. Echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na infographic ahụ agwakwara uru ndị isi! Ọ bụ ebe a ka anyị na-ahụ ọtụtụ elele. Ihe omuma ahu na aru oru oma nke ikerita uzo nke Chris